ထိုင်းနိုင်ငံက ချမ်းသာကြွယ်ဝသော နိုင်ငံခြားသားများအား ဆွဲဆောင်ရန် ကာလရှည်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို အတည်ပြု - Xinhua News Agency
ဘန်ကောက် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံက လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၁ သန်း ဆွဲဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အလားအလာမြင့်မားသောနိုင်ငံခြားသားများ ရေရှည်နေထိုင်ခွင့် အစီအမံများကို စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Thanakorn Wangboonkongchana က အစိုးရအဖွဲ့က ရည်မှန်းထားသော အုပ်စုလေးစုဖြစ်သည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံသားများ ၊ အငြိမ်းစားနိုင်ငံခြားသားများ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလုပ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် အဝေးရောက်အလုပ်သမား နှင့် စွမ်းရည်မြင့် ပညာရှင်များအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် စီးပွားရေးလှုံဆော်မှု အစီအမံများတွင် ဆွဲဆောင်ရန် မူအရ အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဓိကအစီအမံများအနက် တစ်ခုမှာ အလားအလာမြင့်မားသော နိုင်ငံခြားသားအုပ်စုများအတွက် သီးသန့်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ဗီဇာအမျိုးအစားသစ် တစ်ခုဖြစ်သည့် ကာလရှည်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာအား မိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအစီအမံအရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့ ရက် ၉၀ အကြာ အစီရင်ခံမှု ကင်းလွတ်ခွင့်ရခြင်းကဲ့သို့ အထူးအခွင့်အရေးများစွာ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Thanakorn ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါအစီအမံတွင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ၊ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် နှင့် ဥပဒေအရ မဖြစ်မနေလုပ်ရသည့် ပြည်တွင်း ဌားရမ်းခ ခွင့်ပြုသည့် ပမာဏအပေါ် ကင်းလွတ်ခွင့် ကဲ့သို့ ဆက်စပ်ဥပဒေများ သို့မဟုတ် နည်းဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ချက်အချို့လည်း ရှိကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားစီးပွားရေး နှင့် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ(NESDC)ရုံး၏ ထုတ်ပြန်မှုအရ ယင်းအစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကာလအား (၂၀၂၂-၂၀၂၆)ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ငါးနှစ်တာကာလ ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေ နိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူ ၁ သန်းခန့် ဝင်ရောက်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ၊ စီးပွားရေးစနစ်တွင် ဘတ် ၁ ထရီလီယံ စီးဝင်လာရန် ၊ ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ဘတ် ၈၀၀ ဘီလီယံ တိုးလာစေရန် နှင့် အခွန်ဝင်ငွေ ဘတ် ၂၇၀ ဘီလီယံ ရရှိစေရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အစီအမံများအား ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Thanakorn က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BANGKOK, Sept. 14 (Xinhua) — Thailand on Tuesday approved measures to attract long-term stay of high-potential foreigners, aiming to attract 1 million people in the next five years.
Government Spokesman Thanakorn Wangboonkongchana said the cabinet has approved in principle investment and economic stimulus measures to attract four target groups including global citizens, foreign retirees, remote workers who intend to work in Thailand and highly-skilled professionals.
One of the major measures is the introduction ofalong-term resident visa,anew type of visa exclusively granted to high-potential foreign groups. Under this category,anumber of privileges will be given, such as exemption of 90-day reports to immigration office, according to Thanakorn.
There are also some amendments to related laws or regulations, such as land ownership, exemption from foreign income tax, and exemption on the mandatory local hiring quota, the spokesman noted.
According to the Office of the National Economic and Social Development Council(NESDC), the implementation period of these measures would be five fiscal years (2022-2026), during which approximately 1 million foreign residents are expected, with the cash flow of 1 trillion Baht in the economic system, an increase of domestic investment by 800 billion Baht, and 270 billion Baht of tax income.
Thanakorn added that these measures will be reevaluated every five years. (1 U.S. dollar equals 32.88 Baht) Enditem
Photo – Thai dancers wearing masks and face shields perform at the Erawan Shrine in Bangkok, Thailand, on Sept. 11, 2021. Thailand on Saturday reported 15,191 new COVID-19 cases and 253 more fatalities, according to the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA).
After assessing the situation, the Thai government eased some restriction measures, allowing shopping malls and parks to reopen from this month, but it has kept the night-time curfews in place till the end of this month. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ရေကြီးမှု ဖြစ်ပေါ်ကာ လူ ၇ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
ထိုင်းနိုင်ငံက COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၄၀ ကျော် ထိုးနှံပေးထား